Misaona ny firenena sy ny vahoaka malagasy : higadona, anio, ny nofomangatsikan’ny Pr Zafy | NewsMada
Misaona ny firenena sy ny vahoaka malagasy : higadona, anio, ny nofomangatsikan’ny Pr Zafy
Lavo ny andrarezina. Tsy tana intsony ny ain’ny Pr Zafy Albert na efa nialana nenina aza. Nindaosin’ny fahafatesana, omaly, ny tenany rehefa notsaboina tao amin’ny Hospital Saint-Pierre atsy La Réunion. Misaona ny firenena manontolo.
“Higadona, anio hariva amin’ny 6 ora eny Ivato, ny nofomangatsikany. Hoentina eny amin’ny trano fonenany eny Ivandry, avy eo. Hafindra sy andrasana eny amin’ny lapan’ny Fanatajanhantena Mahamasina ny alahady. Eny koa ny hanaovana ny famangiana. Hatao veloma farany eny an-toerana ihany ny alatsinainy ary hitarika ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana amin’izany ny eo anivon’ny FFKM”, hoy ny akaiky azy, i Tabera Randriamanantsoa. Hoentina any Antsiranana avy eo ary horaisin’ny vahoaka ao Ambilobe, tanindrazany. Tsy mbola voafaritra kosa ny fotoana handevenana fa mbola ifampidinihana eo amin’ny fianakaviana sy ny fitondrana, mandray an-tanana manontolo ny fikarakarana rehetra.
Tsiahivina fa tratry ny fahatsentsenan’ny lalandra (AVC) ao amin’ny loha ny filoha teo aloha, Zafy Albert, ny herinandro teo. Nentina teny Befelatanana sy teny amin’ny klinika Ilafy avy eo izy, saingy tsy maintsy nalefa maika tatsy La Reunion, afakomaly tolakandro, mba hodidina. Tsy tana anefa ny ainy, omaly antoandro tokony ho tamin’ny 11 ora. “Isaorana ny vahoaka malagasy sy ny fitondrana… Tahaka izany koa ny tompon’ny klinika Ilafy nanampy tamin’ny fiaramanidina manokana, ny mpitsabo ary teo akaikin’ny fianakaviana hatrany hatramin’ny minitra farany…”, hoy i Tabera Rabemanantsoa.
Filoham-pirenena nitondra telo taona…
Filoham-pirenena ny 27 marsa 1993 hatramin’ny 5 septambra 1996 ny Pr Zafy. Nahafantarana azy ny maha Rain’ny demokrasia ny tenany satria nisokatra sy niparitaka nanomboka tamin’ny fiandohan’ny fitondrany ny haino aman-jery tsy miankina. Anisan’ny nivoy hatrany ny fampihavanana ny tenany, nanomboka ny taona 2002 rehefa nandalo krizy ny firenena.
Teraka tany Ambilobe ny 1 mey 1927 ny Pr Zafy. 90 taona katroka izy izao nindaosan’ny fahafatesana izao. Nandalina ho mpitsabo tany amin’ny oniversiten’i Montpellier sy i Paris, Frantsa. Profesora mpandidy nefa koa manana ny mari-pahaizana momba ny matematika sy ny fizika.
Minisitry ny Fahasalamana fony fitondrana miaramila, notarihin’ny Jly Ramanantsoa Gabriel ny taona 1972 hatramin’ny 1975. Nanohitra ny fitondran’ny filoha Ratsiraka Didier nanomboka ny taona 1975.
Nametraka ny demokrasia sy ny fahalalahana
Nitaky ny hametrahana ny fahalalahan’ny fanaovana politika sy ny demokrasia nanomboka ny taona 1989, fony fitondrana Ratsiraka. Natsangany avy eo ny antokony, UNDD. Anisan’ireo nitaky ny hanovana ny fitondrana tamin’izany niaraka tamin’ireo mpanao politika maromaro. Nanangana ny Hery velona Rasalama avy eo ary nitaky ny hanovana ny lalàmpanorenana. Nisy hatrany amin’ny fidinana an-dalambe teny amin’ny kianjan’ny 13 mey izany. Hiakan’ny mpitolona : “Harodana ny mandan’i Jeriko”. Tonga hatrany amin’ny fitarihany ny vahoaka nanao ny “Diaben’ny Fahafahana” izany ny 10 aogositra 1991. Voasonia avy eo ny fifanarahan’ny 31 oktobra, niarahan’ny hery velona eto amin’ny firenena taorian’izany. Lasa filohan’ny Fahefana avom-panjakana (HAE) avy eo… Noreseny ny amiraly Ratsiraka tamin’ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 1993, tamin’ny isam-bato 66%. Zary lasa anarany ny hoe “Rain’ny demokrasia”.
Ankoatra izany, nambaran’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana, omaly teny Mahazoarivo, fa fisaonam-pirenena, manomboka anio hatramin’ny fotoana handevenana azy.
Filoha nasionalin’ny Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo : “Maneho etoana aho, amin’ny anaran’ny mpikambana rehetra ao amin’ny Malagasy Miara-Miainga sy amin’ny anarako manokana, ny fiaraha-miory amin’ny fianakaviany, amin’ny antoko politikany UNDD, ary amin’ny vahoaka malagasy. Very olomanga sy tena raiaman-dreny ny firenena malagasy ankehitriny. Mandria am-piadanana Profesora Zafy, masoandro mody andrefan-tanàna”.
Filoha nasionalin’ny antoko Roso ho an’ny demokrasia sy sosialy (RDS), Andrianirina Fetison : “Very olon’ny fihavanana sy ny fampihavanana ny Malagasy sy i Madagasikara @ izao nalasanan’ny raiamandreny Zafy Albert izao. Fomba iray hahatsiarovantsika sy hankatoavintsika ny asa vitany ny hahatontosa ny fampihavanam-pirenena. Ary tena fotoany indrindra izao ».
Filoha nasionalin’ny antoko Kintana, Tabera Randriamanantsoa : « Tena malahelo… Lasa ilay Rain’ny demokrasia sy ny fampihavanana. Tsy vitany ny nametraka ny tena fampihavanam-pirenena. Malahelo ny firenena… Tsy mba mandainga na manao kolikoly izy ary tsy voarohirohy amin’ny fangalaram-bolam-panjakana izany ny tenany sy ny mpiara-dia aminy…”